» अध्यात्मको बाटोमा १५ – कर्म स्वभावले जात बनेको हो ?
भागवतगीताको१८अध्याय, श्लोक ४१ मा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई भन्नु भएको छ ।
तर माथिको श्लोक अनुसार मानिसको स्वभाव अनुसार उसको जातलाई विभक्त गरिएको हो । भनेर पनि अर्थ बुझ्न सकिन्छ । किन भने मान्छेले स्वभाव अनुसार कर्म गर्दछ तत्सम्बन्धी संगत पनी गर्दछ । अर्थात संगत अनुसारको स्वभाव पनी बनाउदछ । मान्छेको स्वभाव अनुसारको गुणलाई जातको संज्ञा दिन खोजिएको हो भन्ने अर्थ लगाउन पनी सकिन्छ । मान्छे जन्मकै आधारमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वा शुद्र हुन् सक्दैन । उसको आचरण स्वभाव र कर्मले मात्रै उ कुन श्रेणीको भन्न सकिन्छ । भन्ने भगवान श्री कृष्णको मत हो भन्ने मलाइ लाग्दछ ।
कुन बर्ग वा जातमा पर्छ भन्ने कुरा यसै अध्यायको श्लोक ४२ मा ब्राह्मणको स्वभाव आचरण र कर्मलाइ व्याख्या गरिएको छ ।
शमो दमस्तप: शौचं क्षान्तिराजर्वमेव च । ज्ञानं विज्ञानामास्तिक्यं ब्रह्म्कर्म स्वभावजम् ।।४२॥
यसकोअर्थ: शान्ति इन्द्रिया निग्रह, तन , मन बचनमा शुध्द्ता, क्षमा, सरलता, शास्त्रको ज्ञान, व्यावहारिक तथा अध्यात्म ज्ञान प्राप्त गर्नु र शास्त्रहरुको अध्ययन र अध्यापन गर्नु आदि कर्म ब्रह्मणहरुको स्वाभाविक कर्म हो । अर्थात यस्ता स्वभाव भएका यी कर्म गर्ने व्यक्ति ब्राह्मण हुन भनेर पनि यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ । यो स्वभाव नभएका मानिस ब्राह्मण कोटिमा पर्दैनन भन्न पनि सकिन्छ । यदि कुनै व्यक्ति ब्राह्मणकुलमा जन्म त लियो तर त्यसको स्वभाव, ब्यबहार र कर्म माथि उल्लेखित बिषयमा छैन भने के उसलाई ब्राह्मण मानिराखने हो त ? अर्थात तत्सम्बन्धी स्वभाव , आचरण र कर्म जुन जुकै वर्ग वा जातले अपनाउछ त्यसलाई ब्राह्मण भन्ने कि नभन्ने ? यो श्लोकले स्पष्ट भनेको छ यी आचरण नगर्ने मान्छे ब्राह्मण हुन् सक्दैन ।
यसको अर्थ : सुरता, तेज, धैर्य, क्षमता र युध्दमा पछाडी नफर्कने, दानशिलता प्रभुत्व तथा नेतृत्वदायो क्षमता यी सबै क्षत्रियका स्वभाविक कर्म हुन् ।
कृषिगौरक्ष्यवाणीज्यं वैश्य कर्म स्वभाजनम् । परिचर्यात्मकं कर्म शुद्रस्यापि स्वभावजम् ।।४४।।
खेतीपाती, पशुपालन, ब्यापार ब्यबसाय बैश्यका स्वभाविक कर्म हुन । स्वभाविक रुपमा खेतीपाती पशुपालन ब्यापार ब्यबसाय गर्ने जो सुकै व्यक्ति पनी वैश्य हो भन्न सकिन्छ । सेवामुलक प्राबिधिक तथा सेवाका कर्महरु शुद्रका स्वभाविक कर्म हुन् । सेवामुलक डाक्टर इन्जिनियर , डकर्मी , वेटर , नर्स , ड्राइभर अर्ध दक्ष , दक्ष वा अदक्ष मजदुर जो सुकै होस जसले मानिसलाइ वा समाजलाई सेवा गर्छ वा सेवा पुर्याउछ । ति सबै शुद्र कोटिका हुन् भन्न सकिन्छ । हामीले देखिरहेका छौ । ब्राह्मण कुलमा जन्मे पनी ब्यापारमा सानै देखि उन्मुख भएको हुन्छन कतिपय मानिसहरु, क्षत्रिय भए पनि कर्मकाण्डीय ब्राह्मणको जस्तो स्वभाव आचरण र कर्म गरेका मानिस देखिन्छन । कतिपय वैश्य भए पनी ब्राह्मण जस्तो कर्म गर्ने र क्षत्रिय जत्सो सुरबीर भएको थुपै उदाहरण छन् । शुद्रकुलमा जन्मेर पनी जप तप ध्यान भगवानको आराधना गर्ने र पढने पढाउने कर्म तल्लिन व्यक्तित्व देखेका छौ । हाम्रो समाजमा इन्जिन र फलामको कर्म गर्ने व्यवसायीहरुले बिश्वकर्मा भगवानको रुपमा पुजा गर्ने उत्सव मनाउछौ । यसरी शुद्रलाई दलित रअछुत पानि नचल्ने भनेर ब्याख्या गरेको कमसेकम मैले भागवतगीतामा भेटाएको छैन /
जुनसुकै शास्त्रले जे भने पनी भागवतगीतामा भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना परम भक्त अर्जुनलाई बर्नाश्रमको बारेमा यसरी सम्झाउनु भएको रहेछ । अहिले समाजमा जुन सुकै जाती बिशेषले पनी जुनसुकै कर्म गरेको देखि राखेका छौ। ब्रामणले फलामको औजार बनाउने उधोग खोलेका छन / जुत्तापसल खोलेका छन ब्यापार गरेका छन / सैनिकबनेका छन / क्षत्रियहरु ब्यापारी छन शुद्रहरु महन्त, टिचर, प्रोफेसर, डाक्टर इन्जिनियर छन् / कुनै पनि जात माथिको कर्म बन्धनमा छैनन । मान्छे जुन सुकै जातमा वा कुलमा जन्मलिए पनी उसको स्वभाव भिन्न भिन्नै हुने गरेको हामीले देखेका छौ । एकै बाबा आमा भएका सन्तान पनी बिभिन्न स्वभावका र बिभिन्न आचरणका भिन्ना भिन्नै कर्म गर्नेहरु जसको परिवारमा पनी देखिन्छन । आफ्नै पुर्खौली न पेशा अपनाएका छन ।न त्यस अनुरुपको कर्म र आचरण गरेको पाउदछौ । त्यसैले मानिस जन्मदा नै आफ्नो निजि स्वभाव लिएर जन्मेको हुन्छ र उसले आफ्नो स्वभाव अनुसारको कर्म आचरण गर्दछ । त्यही स्वभाविक कर्म आचरण अनुसार कर्म गरेर मात्र उसले परम सिध्दी प्राप्त गर्न सक्दछ । जसरी राम्रो कलेजले कुन बिध्दार्थी कुन बिषयमा अगाडी सम्म अध्यायन गर्न सक्छ भनेर छान्दछ र सो बिषयको लागि महत्व दिन्छ । अर्थात आफ्ना बाबु आमाले पनि आफ्ना सन्तानलाई उनीहरुको रुचि स्वाभाव अनुसारको शिक्षा दिक्षा दिएमा आफ्ना कर्ममा सफलता पाउदछन ।
जसरी भोजन त्यसै गरि मानिसको स्वभाव पनि सात्विक राजस तामस हुन्छन । यसरी मानिसले आफ्नो भोजनमा जस्तो रुचि गर्दछन त्यहि भोजनको अनुरुप स्वभाव पनी सात्विक, राजस र तामस हुन्छ